Sajilo Patro Blogs: अण्डा कति खाने ? कसरी खाने ?
अण्डा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । तर एकदिनमा कति अण्डा खानुपर्छ र पकाउने सही तरिका के हो भन्नेबारेमा तपाईंलाई थाहा छ ? या धेरै अण्डाले हानी गर्न सक्छ ? चिकित्सकहरु पोषक तत्वले भरपूर भएकाले खानामा अण्डा सामेल गर्न सल्लाह दिन्छन् । यो भिटामिन ए, बी, डी र बी १२ का अलावा लुटीन र जीएजेन्थिनजस्ता पोषक तत्वले भरपूर हुन्छ । आँखाका लागि पनि अण्डा सेवन उपयोगी मानिन्छ । बेलायतका डाइटिसियन डा. फ्र्यांकी फिलिप्सका अनुसार एक दिनमा एक या दुइ अण्डामात्र खान सकिन्छ । उनी भन्छन्, ‘धेरै अण्डा खाँदा डराउनुपर्दैन । तर के ध्यान दिनुस् भने कुनै पनि खानेकुरा बढी खानु भनेको अरु...
निपा भाइरस पशुबाट मानिसमा सर्ने नयाँ रोगको रुपमा विकसित हुँदै गरेको एक खतरनाक भाइरस संक्रमण हो । यसले मानिस र पशु दुबैलाई संक्रमण गर्न सक्दछ । यस भाइरस प्राकृतिक रुपमा टेरोपस भन्ने प्रजातिको चमेरोमा रहने गर्दछ । निपा भाइरस पारामिक्जोभाइरिडि परिवारभित्र पर्ने हेप्नीभाइरस भन्ने समूहको एक सदस्य हो जसमा यस बाहेक हेन्ड्रा भाइरस पनि पर्दछ । सन् १९९४ मा घोडा र मानिस हरुमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धि रोगको कारक तत्वको रुपमा यस भाइरस पहिलोपटक पत्ता लागेको थियो । त्यसैगरि पहिलो पटक सन १९९८ मा मलेसियामा यो भाइरस संक्रमणले महामारीको रुप लिएको थियो। त्यस बखत सुंगुरको...
गर्मीमा मुटुका बिरामीले के गर्ने, के नगर्ने ?
गर्मीको समय मुटुका बिरामीका लागि अलि खतरनाक मानिन्छ। वातावरणीय तापमान वृद्धिको असर मुटुमा पर्छ। शरीर चिसो बनाउन पसीना आवश्यक हुन्छ। पसीनाले नै शरीरको तापक्रम सन्तुलनमा राखिरहन्छ। यदि शरीर केही कारणवश चिसो हुन सकेन भने मुटुलाई पम्प गर्न बढी मिहिनेत गर्नुपर्छ। मुटुरोग विशेषज्ञका अनुसार तापमान वृद्धिका कारण कही वर्षयता मुटुसँग सम्बन्धित समस्या (विशेषगरी हृदयघात) बढिरहेको छ। यसैले गर्मी मौसममा मुटुका बिरामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। बढी समय चर्को घाममा रहनाले रक्तचाप घट्छ र मुटुमा समस्या आउँछ। गर्मी मौसममा स्वस्थ रहन उच्च रक्तचाप भएका मानिसले निम्न कुरामा...
गर्मी मौसम सुरु हुन् थाल्यो बजारमा बेच्न राखिएका खर्बुजा देख्ना साथ खाउँ खाउँ लाग्न थाल्छ । सामान्य तयातिर्खा मेटाउन र पानीको मात्रा शरीरमा सन्तुलित गर्न खाइने खर्बुजा प्रसस्त मात्रामा भिटामिन, खनिज, एन्टिअक्सीडेन्टहरु पाईन्छ । त्यसैले स्वास्थ्यका लागि अझ बढी लाभदायी हुन्छ । के केमा हुन्छ लाभ ? एक पटक हेरौँ : १. दमबाट बचाउँछ : खरबुजामा प्रसस्त मात्रामा पाईने भिटामिन सी ले तपार्इँलाई दमको रोगी बन्न दिदैन । २. रक्तचाप नियन्त्रण : अमेरिकन जर्नल अफहाइपरटेन्सनमा प्रकाशित अध्ययनका अनुसार खर्बुजा खाने ब्यक्तिमा उच्च रक्तचाप तथा मुटु सम्बन्धी रोग लाग्न...
रुँदा हुने फाइदा
मानिस खुसी हुँदा र दुःखी हुँदा रुने गर्छन् तर, मानिस रोएको हामी जोकोहीलाई पनि पनि मन पर्दैन । हाँस्दा स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदा हुनेबारे सुनेका छौं तर, रुँदा हुने फाइदाको बारेमा कसैलाई थाहा नै नभएको हुसक्छ । त्यसैले आउनुस् हेरौं रुँदा हुने फाइदाका बारेमा १. रुँदा आँखाको दृष्टि क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । आँखामा आँसु आउँदा नानी चिसो हुन्छ र आँखा सुख्खा रहन पाउँदैंन र यसो गर्दा आँखाको दृष्टि क्षमता बढ्छ । ३. जब मानिस दुःखका कारण रुन्छ, त्यतिबेला शरीरमा विषाक्त पदार्थ बन्न थाल्छ । यस्ता विषाक्त पदार्थ आँसुमार्फत् बाहिर निस्कन्छन् । ४. शरीरमा म्याग्नीज...